3:36 pm 2020-11-17
4:51 pm 2020-10-30
4:07 pm 2020-10-06
5:08 pm 2020-10-03
काठमाडौं । टाटाको सफल सब फोर मिटर एसयूभी नेक्सनको इलेक्ट्रीक मोडल आर्थिक वर्ष २०२०/२१ को अर्धवार्षिक अवधिमा भारतमा सर्वाधिक बिक्री हुने इलेक्ट्रीक कार बन्न सफल भएको छ ।
अहिले भारतमा टाटा नेक्सन, हुन्डाई भेन्यू, एमजी इजेडएस, महिन्द्र इभेरिटो, टाटा टिगोर इभी बिक्री हुँदै आएको छ । यी मध्य ६ महिनामा सबैभन्दा बढी बिक्री टाटा नेक्सनक इलेक्ट्रीक कारको भएको छ ।
कम्पनीले यस अवधिमा १ हजार १५१ यूनिट नेक्सन बिक्री गर्दै भारती इलेक्ट्रीक कारको बजार हिस्सामा ६१.४ प्रतिशत ओगट्न सफल भएको छ । त्यसैगरि दोस्रो स्थानमा रहेको एमजी इजेडएसले २७.४ प्रतिशत बजार हिस्सा ओगट्दै ५१४ यूनिट इजेडएस बिक्री गर्न सफल भएको छ ।
सूचीको तेस्रो थानमा टाटा टिगोर इभी र चौथो स्थानमा हुन्डाई कोना रहन सफल भएको छ ।
टाटाको आधिकारीक वितरक सिप्रदी ट्रेडिङले नयाँ वर्ष २०७७ बाट नेपाल बिक्री सुरु गर्ने तयारी गरेको नेक्सन इभी कोभिड १९ को कारण त्यतिबेला बिक्री सुरु हुन सकेन ।
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटबाट बिद्युतीय कारमा करका दरमा व्यापक वृद्धि गरेपछि यसलाई नेपाल ल्याउने प्रक्रिया नै स्थगित भएको थियो । अन्य कम्पनीहरुले समेत विद्युतीय कार आयत रोकेपछि सरकारले यसमा लगाइएको अन्तःशुल्कमा केही छुट दिने घोषणा गरेपछि अन्य कम्पनीहरुले इलेक्ट्रीक कारको बुकिङ सुरु गरेका छन् ।
यस्तोमासिप्रदी ट्रेडिङले पनि नेक्सन इभी नेपाल ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
काठमाडौं — आश्विन २०, २०७७।
दशैंतिहार नजिकिएसँगै अटोमोबाइल व्यवसाय चलायमान बन्न थालेको छ । बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाले थलिएको अटोमोबाइलको व्यवसाय दशैंतिहारलाई लक्षित गरी ल्याइएका स्किम र अफरहरूका कारण पनि बजार जुर्मुराउन मद्दत पुगेको हो ।
काठमाडौं, १७ असोज । बजाज मोटरसाइकलका लागि अधिकृत वितरक हंसराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनी प्रा.लि.ले आज नेपालमा नयाँ एभेन्जर स्ट्रीट १६० एबीएस भित्र्याएको छ ।
नयाँ एभेन्जर स्ट्रीट १६० स्पोस्टर डिजाइनमा आउँद छ र शहरका लागि केहि भिन्न रुपमा देखा पर्नेहरुका लागि बनाइएको हो । यसमा रोडस्टर डिजाइनको हेडल्याम्प छ र एलईडी डीआरएलका साथ यसले दिर्घकालिन छाप सृजना गर्दछ र यसमा शहर र हाईवेका लागि सहज गतिशीलता प्रदान गर्न स्ट्रीट कन्ट्रोल ह्यान्डलबारहरु पनि छन् ।
यो १६०सीसी डीटीएस—आई इन्जिनद्वारा संचालित छ जसले १६०ः१५ पीएस पावर र १३.५ एनएम टर्क उत्पादन गर्दछ । यसले ५—स्पीड म्यानुअल ट्रान्समीसन पनि प्रयोग गर्दछ ।
सुरक्षाका लागि बजाज एभेन्जर स्ट्रीट १६० अगाडि २८० एमएम डिस्क ब्रेक र पछाडि भागमा १३० एमएम ड्रम ब्रेकको साथ आउँदछ । ब्रेकका इकाईहरु मानकको रुपमा एकल च्यानल एबीएस संगै छन् ।
3:52 pm 2020-09-29
काठमाडौं — आश्विन १३, २०७७।
सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि गरेको बन्दाबन्दीयता नेपालमा सवारी एसेम्बल गरिरहेका २ कम्पनी बन्द भएका छन् ।
गत वर्ष नाडा अटो शोमा निर्वतमान अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले नेपालमै सवारीसाधन एसेम्बलिङ गर्ने कम्पनीलाई सरकारले नीतिगत संरक्षण र सहजीकरण गर्ने बताएका थिए । यद्यपि, सरकारकै नीतिगत कठिनाइका कारण एसेम्बलिङ उद्योगमा समस्या रहेको सञ्चालकहरु बताउँछन् ।
नेपालमा एसेम्बलिङ गरिरहेका २ वटा चिनियाँ कम्पनी बन्द भए पनि बन्दाबन्दीकै बीचमा शंकर ग्रुपअन्तर्गतको जगदम्बा मोटर्सले टीभीएसका मोटरसाइकल उत्पादन सुरु गरेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
नगद छुट र थोरै डाउन पेमेन्ट मात्रै होइन, यी ४ कुरा बुझेर दशैंमा कार किन्दा राम्रो
9:35 pm 2020-09-27
काठमाडौं । चाडपर्व नजिकिएसँगै मुख्य गाडी बिक्रेता कम्पनीहरुले ग्राहकलाई आकर्षित गर्न विभिन्न स्कीमहरु ल्याएका छन् । यस्तोमा गाडी किन्ने ग्राहकले तत्काल कति नाफा लिन सकिन्छ भन्दापनि आफुले खरिद गर्ने गाडीले भविष्यमा दिने सेवालगायतका विषयमा जान्न जरुरी हुन्छ ।
अहिले गाडी बिक्रेता कम्पनीहरुले अत्यन्त न्यून डाउन पेमेन्ट गरेरपनि गाडी खरिद गर्न सक्ने अफर गरेका छन् भने नगद छुट, एक्सचेन्ज सुविधा, एक वर्षको बीमा, थप एशोसरिज, लोयलटी वोनस जस्ता अफर दिइरहेका छन् ।
यदि तपाईले कम्पनीले घोषणा गरेका अफरकै भरमा कुनैपनि गाडी छनोट गर्नु भयो भने भविष्यमा त्यसले सृजना गर्ने दायित्व र सर्भिसमा व्योर्होनु पर्ने झन्झटले दुःख पाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले गाडी किन्नु पूर्व केही अत्यावश्यक विषयबारे जानकारी राख्नु पर्ने हुन्छ ।
१. बिक्रीपछिको सेवाः गाडी खरिद गर्नु पहिला कम्पनीले दिने बिक्रीपछिको सेवा र त्यसमा लाग्ने खर्चको विषयमा सामान्य जानकारी लिनु पर्छ । अन्यथा पछि गाडीमा समस्या आउन थालेपछि तपाईले हैरानी व्योर्होनु पर्ने हुन्छ ।
त्यसैले तपाईले छनोट गर्ने गाडी बिक्रेताको सर्भिस नेटवर्क कति छ ? पार्टसहरुको मूल्य कति महंगो छ ? र तपाईले आफ्नो गाडी लिएर मुख्यत यात्रा गर्ने क्षेत्रमा गाडीको सर्भिस उपलब्ध छ वा छैन भन्ने हेर्नु पर्छ ।
२. रिसेल भ्यालुः एउटा गाडी सधैभरी चढ्न जो कोहीलाई मन नलाग्न सक्छ । वा, कुनै कारण बस किनेको केही समयपछि तपाईको कार बिक्री गर्नु पर्ने हुन सक्छ । यस्तोमा सबै ब्राण्डका कारमा रिसेल मूल्य उस्तै आउँछ भन्ने हुँदैन । बजारमा धेरैले प्रयोग गर्ने, राम्रो सर्भिस सुविधा भएको, सहजै पार्टस लगायतका सामान उपलब्ध रहेको, ब्राण्ड प्रतिको विश्वास भएको जस्ता विषयले रिसेल मूल्य निर्धारण गर्छ ।
त्यसैले बजारमा रिसेल मूल्यको विषयमा जानकारी लिएर कुनैपनि ब्राण्डको कार किनेको खण्डमा पछि पछुताउनु पर्ने छैन ।
३. सुरक्षा फिचरः अहिले विश्वभर गाडी उत्पादकले मानव सुरुक्षामा निकै ठूलो खर्च गरिरहेका छन् । दुई वर्ष अगाडिसम्म एयरव्याग समेत उपलब्ध नभएका कारहरु बजारमा उपलब्ध रहेका थिए । तर, अहिले कार किन्दा एयरव्याग, इन्जिन इमोविलाइजर, एबीएस, इबीडी, पार्किङ सेन्सर, रिभर्स क्यामारा जस्ता वेसिक फिचर भएका गाडी खोज्नु पर्छ ।
४. आरामदायी यात्राः मानिसले घर र अफिसपछि सर्वाधिक धेरै समय विताउने सवारी साधनमा नै हो । यस्तोमा आफुले किन्ने कार आरामदायी र आकर्षक हुनु पर्छ भन्ने मान्यता विश्वभर रहेको पाइन्छ ।
एड्जस्टेवल स्टेरिङ, सिट लगायतका बेसिक फिचर भएका गाडी छनोट गर्नु पर्छ । सिटको क्वालिटी, इन्फोटेन्टमेन्ट सिस्टम, पावर वीन्डो जस्ता सामान्य फिचर नभएको गाडी किन्दा पछि आफैँलाई कठिन हुन सक्छ । त्यसैले यी विषयमा ध्यान दिएर गाडी किन्ने हो भने तपाईले गरेको छनोट सहि हुने छ ।
हिरोले ल्यायो दशैं अफर, यस्तो छ मोटरसाइकल र स्कुटरमा छुट
6:32 pm 2020-09-26
काठमाडौं । हिरो मोटरसाइकलको नेपालका लागि आधिकारिक एनजीएम हिरोले दशैं अफर सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले ल्याएको अफरमा नगद छुट तथा बम्पर उपहार जित्न सक्ने जनाइएको छ ।
चाडपर्वलाई लक्षित गरेर विभिन्न कम्पनीले अफरहरु सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । यस्तोमा हिरोले ल्याएको अफरमा ग्राहकले नगद छुट ५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्ने छन् । यसका अलावा स्क्रायचकाड मार्फत नगद १ हजारदेखि १ लाखसम्म जित्ने मौका रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
यस्तै यो योजना अवधिभर दुई जना लक्की ड्र मार्फत छानिने बिजेताले १÷१ लाख रुपैयाँ नगद जित्न सक्ने छन् ।
हिरोले हाल ५ मोडलका स्कुटर तथा १० मोडलका मोटरसाइकल बिक्री गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय नेपाली बजारमा हिरो एक्सपल्स २०० ले राम्रो व्यापार गरिरहेको छ ।
यस्तै कम्पनीले केही दिन अघिमात्र सुपर स्प्लेन्डर १२५ आइबीएस नेपालमा सार्वजनिक गरेर बिक्री गर्दै आएको छ ।
6:30 pm 2020-09-26
टाटाका कारमा ४ लाखसम्म नगद छुट
6:22 pm 2020-09-26
काठमाडौं । नेपालका लागि टाटा मोटर्सको अधिकारिक वितरक सिप्रदी ट्रेडिङ्ग प्रालिले दशैं अफर सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले ग्राहकलाई नगद छुटदेखि अन्य विभिन्न अफर गरेको हो ।
कम्पनीले ल्याएको ‘टाटा मोटर्स दशैं अफर’ योजना अन्तर्गत टाटा प्यासेन्जर गाडीहरुको खरिदमा ४ लाखसम्म नगद छुट, निःशुल्क एक वर्षको सवारी कर, प्रत्येक गाडीको मुल्याङ्कनमा सरप्राइज गिफ्ट, प्रत्येक टेस्ट ड्राइभमा आकर्षक उपहार र जुनसुकै गाडीको एक्सचेन्जमा ५० हजारसम्मको एक्सचेन्ज बोनस प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
दशैंको अवशरमा ग्राहक महानुभावहरुले टाटा मोटर्सको जुनसुकै सोरुममा गएर नयाँ तथा अत्याधुनिक डिजाइनका उत्पादनहरु टाटा एच फाईभ, नेक्सन, टियागो, टिगोर र अल्ट्रोज लगायतका गाडीहरु खरिद गर्न सक्ने छन् ।
2:25 pm 2020-09-25
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व), असोज ९ । नवलपुरको दाउन्नेमा पहिरोले बस भिरबाट खसाल्दा एकको मृत्यु भएको छ भने छ जना घाइते भएका छन् । जिल्लाको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका–२ दाउन्नेस्थित विश्वकर्मा मन्दिर नजिक सडकमाथिबाट खसेको पहिरोको कारण बस भिरबाट खस्दा बसमा सवार रुकुमपश्चिम आठबीसकोट गाउँपालिका–१० बस्ने २५ वर्षीय हरिषचन्द्र केसीको मृत्यु भएको हो ।
यसैबीच दाउन्नेको यस खण्डमा बिहीबार बिहान ७ बजेबाट पहिरो खसी राजमार्ग बन्द भएकामा अझै पूर्णरूपमा सञ्चालन हुनसकेको छैन । गए राति पहिरो पन्छाएर सामान्यरूपमा यातायात सञ्चालन भएकामा पुनः सोही स्थानमा आज बिहान ३ बजेको समयमा पहिरो खसेपछि अहिले राजमार्ग एकतर्फीरूपमा सञ्चालनमा रहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक खाँणले बताए । रासस
1:22 pm 2020-05-01